Formstack: Manampia endrika amin'ny Dropbox | Martech Zone
Alatsinainy 25 Febroary 2013 Alatsinainy Janoary 1, 2018 Douglas Karr
Mampiasa Dropbox saika isan'andro izahay hanangonana sy hizarana rakitra amin'ireo mpanjifanay. Indraindray, ny mpanjifanay dia tsy manana kaonty Dropbox na tsy mamela azy ireo hisoratra anarana ny politikan'ny orinasan'izy ireo. Mba hanangonana ireo rakitra ireo dia manamboatra endrika fotsiny izahay Formstack (mpanohana ny haitao anay) ary ampidiro ao ny form Dropbox.
Ahoana ny fomba hanampiana endrika amin'ny Dropbox
Ny fampidirana Dropbox amin'ny endrikao dia sintomina ary milatsaka toy ny sisa rehetra Formstack mora ampiasaina.
Mandeha mankany amin'ny Settings amin'ny Forma anao.
Mandeha mankany amin'ny Hub fampidirana.
Select Documents ary avy eo Manampia Dropbox.
Omeo alàlana ny fampiharana, safidio ny fampirimanao ary vonona handeha ianao!
Tags: Dropboxfisie fampidinana rakitratenyformstackfoibe fampidiranaTechmampakatra endrika
25 Feb 2013 tamin'ny 11:01 maraina
Nice! Nesoriko tamin'i Evernote ity mba hojerena rehefa avy eo.